Maxkamada sare oo amartay in la sii daayo Miguna Miguna – The Voice of Northeastern Kenya
Maxkamada sare oo amartay in la sii daayo Miguna Miguna
Star FM February 6, 2018
Maxkamada sare ee magaaladatan Nairobi ayaa amartay in la sii daayo Miguna Miguna oo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa dhaarashadii hogaamiyaha mucaaradka ee Raila Odinga
Amarkan ayaa waxaa ka soo baxay garsoore lagu magacaabo Luka Kimaru.
Maanta ayay ahayd markii maxkamad ku taalo ismaamulka Kajiado uu ka soo hormuuqday murashaxii xilka gudoomiyanimo ee ismaamulka Nairobi ee sanadkii tagay Miguna Miguna oo ka mid ah siyaasiyiinta garabka mucaaradka ee Nasa.
Qareenkan oo ay wehelinayaan abaanduulaha booliska Joseph Boinnet iyo agaasimaha waaxda dambi barista George Kinoti ayaa lagu waday inay tagaan maxkamada Milimani iyadoo ciidamada booliska ay amaanka goobtaasi si weyn u sugayaan.
Hasa ahaate arrintaasi meysan dhicin oo waxaa la horgeeyay garsoore ka hawlgalo maxkamad ku taalo Kajiado.
Joseph Boinnet iyo George Kinoti ayaa lagu eedeyay inay iska dhagatireen amar maxkamadeed oo ahaa in shalay 2-dii duhurnimo ay keenaan Miguna miguna oo la qabtay jimcihii la soo dhaafay.
Siyaasigan oo horay u sheegay inuu yahay taliyaha dhaqdhaqaaqa NRM ee ay dowlada mamnuucday ayaa lagu soo oogay dacwad ah inuu ku kacay khiyaano qaran maadama uu ka qeyb galay xafladii uu isku dhaariyay hoggaamiyaha urur weynaha mucaaradka Nasa Raila Odinga tallabadaasi oo dowlada ay ku tilmaantay mid sharci darro ah.
← DHAGEYSO Warka Duhurnimo ee Star Fm 06-02-2018
Dowladda dalka ayaa xanibtay baasaboorka David Ndii →